Russie 2018 : Manana tombony Angleterre, nefa tsy milavo lefona i Croatie -
AccueilVaovao SamihafaRussie 2018 : Manana tombony Angleterre, nefa tsy milavo lefona i Croatie
11/07/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Lalao manasa-dalana faharoa no tanterahina anio alina ao anatin’ny fiadiana ny amboara eran-tany eo amin’ny baolina kitra. Ny kianjan’i Loujniki ao Moscou no hampiantrano ny lalao. Raha ny fijery eny ambony latabatra, dia manana tombony amin’io fihaonana io i Angleterre nefa tsy milavo lefona avy hatrany i Croatie. Raha ny kajikajin’ireo mpanaraka sy mpahay ity taranja ity dia 41% ny taha mety ahazon’ny ekipa anglisy ny fandresena ao anatin’ny 90 minitra, raha 38% ho an’ny Kroaty ; 31% no mety hisian’ny ady sahala. Na izany aza, boribory ny baolina ary samy manana ny paikadiny hiadiana ny tapakila amin’ny famaranana ny ekipa roa tonta. Fihaonana faha-8 eo amin’ny ekipa roa tonta io lalao manasa-dalana faharoa io. Tamin’ireo lalao fito teo aloha dia inefatra nahazo fandresena i Angleterre, indroa kosa ry zareo Croatie ary ady sahala indray mandeha. Fihaonana faha-2 ihany koa io eo amin’i Angleterre sy Croatie tamin’ny fihaonana an-tampony toa izao. Ny voalohany dia tamin’ny fiadiana ny amboaran’i Eoropa tamin’ny 2004. Resin’i Angleterre tamin’ny isa 4-2 i Croatie tamin’io lalao io.
Hatramin’ny taona 1998 nahatafakatra an’i Croatie tamin’ny Mondial eo amin’ny baolina kitra, dia faharoa izy izao no tafakatra amin’ny dingan’ny manasa-dalana. Na izany aza, efa nivoaka sempotra ry zareo kroaty vao tonga tamin’io dingana io, satria dia tamin’ny alalan’ny fandakana « tir au but » no nandreseny an’i Danemark tamin’ny ampahefa-dalana, ary toa izany koa no nanilihiny an’i Russie teo amin’ny ampahefa-dalana.
Ao anatin’ny fankalazana ny faha-70 taonan’ny tolom-panafahana, nisy fihaonam-pikarohana ara-tsiantifika iraisam-pirenena nandalinana ny tena zava-niseho marina tamin’ny 29 Marsa 1947, omaly teny Tsimbazaza. “Firenena Malagasy afaka sy mahaleotena”, io no lohahevitry ny fihaonana. Nosafidiana manokana ...Tohiny